Maamul Gobadledyada, haddii la waayey meel ay jiraan, Kanaalkii Itobiya ayaa laga xiray=Nasashada Jimcaha.Q-144-aad=
Friday April 19, 2019 - 20:02:35 in Wararka by Mogadishu Times
1-Naag ayaa dhakhtar u tagatay, kuna tiri: Datoore, Annigu ma xanuunsani, Laakin Ninkeeyga ayaan dhib ku qabaa. Markii uu Hurdayo ayuu iska hadlayaa, habeenkii oo dhan. Dhakhratkii ayaa ku yiri: Marka uu soo jeedo u ogolaaw, in uu Hadlo. (F.S: 1aad)
1-Naag ayaa dhakhtar u tagatay, kuna tiri: Datoore, Annigu ma xanuunsani, Laakin Ninkeeyga ayaan dhib ku qabaa. Markii uu Hurdayo ayuu iska hadlayaa, habeenkii oo dhan. Dhakhratkii ayaa ku yiri: Marka uu soo jeedo u ogolaaw, in uu Hadlo. (F.S: 1aad) (Dadka Banaan baxayo,ha loo ogolaado inay hadlaan, Banaan baxa ka hor)
2-Nin ayaa yiri: Marka aan Guriga imaado ma aqaan Caruurteeydu Qolalka ey ku kala Jiraan. Saaxiibkii ayaa ku yiri: Marka aad Guriga timaado, ka Dami WiFi-ga ee sug ( F.S: 2aad)
(Maamul Gobadledyada, haddii la waayey meel ay jiraan, Kanaalkii Itobiya ayaa laga xiray, Ar Ciyaalka xaafadaa, khadkii Dubai ayey furteen)
3-Saddax Quraansho ayaa ku dul istaagtay Maroodi hurdayo, mid ayaa tiri: war inta uu Hurdayo aan Dilno, tii Labaad ayaa tiri: yaan la Dilin ee Labada Faanood aan ka siibano. ( F.S: 3aad)
( tii saddexaad ayaa tiri: wixii ay tiri, ayaaba Anniga lafteeydu aan hilmaamay ee i Xasuusi……………………………. "waan idin aqaan, meeshii banaanba Qabiil ayaad ku buuxisiin, qof aadan weydiinina waxa uu ula jeedana aragtidiisa ayaad Qabiil u macneeysiin, Bal quraanshadan 3aad noo sheega? Hadaadan qabyaaladiiste eheyn” )
4-Waqtigii Kacaanka, Haween Reer Wardhiigley ah ayaa Degmada dhaxdeeda, waxaa lagu gudoonsiinayay Abaal marin ey ku muteysteen Nadaafadda Xaafadda. Intii shirku Socday ayaa la ogaaday in Gabdhahoodu ey Qashinka ku shubaan waddada.
Gabdhihii oo waaweynaaday ayaa 30 Sanno kadib,iyaga oo degmada Jooga, lagala hadlay Muhimdda Nabdagalyada iyo in laga Hortago Rabshadah, intii shirku Socday ayaa la ogaaday in Wiilashoodu, ey wadada Goome ku gubayaan, rabshadana ey ka wadaan. ( F.S: 4aad)
(Ar Haweenka Reer Wartaaaaaaa!!!!!)
5-Nin Masaari ah ayaa Xabsi uu ku jiray 15 Sanno ka soo baxsaday, waxa uu soo galay Guri,waxa uuna arkay Nin iyo Xaaskiisii oo Sariirta wada jiifo. Ninkii ayuu ku xirxiray Kursi Qolka dhax yiil. Kadibna waa is qaawiyay, Nagtii ayuuna u tagay. Waa ku dul raftay, dhagaha ayuuna wax ugu sheegayay.
Wax xoogaa kadib ayuu Musqusha aaday. Intii uu Musqusha ku Maqnaa ayaa Ninkii Xaaskiisii ku yiri: Waad ii jeedaa, waan xirxiranahay kumana difaaci karo, Ninkaan Dharkiisa waad u jeeda in uu Xabsi ka soo baxsaday, Labadeenana wuu na diliyaa. Fadlan wixii uu rabo u sameey, Xoog iska raadi oo Qanci.
Naagtii ayaa ku tiri: Ninku wuxuu Dhagta iigu sheegay inuu Qaniis yahay, wuxuuna i weeydiiyay Saliida " Vaseline” waxaana ku iri: Musqusha ayey ku jirtaa. Ee Ninkeygoow, adigu xoog isku yeel oo si fiican u qanci. (F.S: 5aad)
(Siyaasiyiinta,shacabka ku leh,is jilciya oo qanciya Dowlada ma weyna ogeyn in Dowladu Dadka oo dhan ka dhexeeyso, amaa iyaga laftooda "Vaseline” loo Doontay)
6- Haweeney ayaa Sadaxdeedii Gabdhood isku mar la guursaday, waxa ey ku tiri: Bil kadib mid waliba ha ii soo Qorto, Warqad ey ku sheegee,wixii ey kala kulantay guurkeeda. Bil kadib ayaa midi u soo qortay Fariin kooban oo ah " Nescofe” hooyadii ma fahmin, waana ku wareertay, wax yar kadib ayeey Kushiinka gashay, Coffee ayey diyaarsatay, waana cabtay, aad ayey uga heshay Coffeedii, wixii koobka ku harayna waa ka heensatay. Waxa ey tiri: haddaa madaxu ii degay oo aan fahmay.
Tii Labaad ayaa u soo qortay Fariin kooban oo ah "Benson Cigarette”. Ma fahmin Hooyadu, waxa ey soo qaaday Baakad Sigaar oo Ninkeedu cabayay, waxana ku dul qoran” Extra Long—– King Size” waxa ey tiri: hadaan Fahmay. Tii Saddexaad ayaa u soo qortay Fariin kooban oo ah” Juba Airways” hooyadii ma fahmin. Waxay soo qaadatay Joornaal meesha yiil oo ay ku qoran tahay iidehda Duulimaadyada Juba Airlways oo ah "10 times a day, Seven days a week”. Waxay tiri: hadaan fahmay Gabdhaheygu dhiba ma qabaan, Allaah ayaa ka soo yeeriyay hadal wanaagsan oo aan ku farxo. ( F.S: 6,7 & 8 aad)
(Waxay ku duceeysatay Allow 3-da Mas’uulna hadal wanaagsan uu ka soo yeero.